Ingqondo neNtliziyo-iiMvakalelo kuSifundo nakwiSigwebo (uKholamu 467) - Rabbi Michael Avraham
Ingqondo neNtliziyo-Iimvakalelo kuSifundo nakwiSigwebo seHalachic (Uluhlu lwama-467)
45 izimvo	/ T. Benisan 10 - 04/2022/XNUMX 10 / 04 / 2022
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, beza kwiphepha elithi Daf La Bibamot, apho umba othandekayo "wendlu yawela kuye kwaye kubonakala umtshana wakhe kwaye akwaziwa ukuba ngubani owafa kuqala, wanciphisa ihempe yakhe kwaye akazange akhulule. "
UHayuta Deutsch undithumelele le sicatshulwa ngala mazwana alandelayo:
Inkulu kakhulu! Umzekelo ophambili (omnye wemininzi kodwa umhle kakhulu) wokudibana phakathi 'kwelabhoratri' yelizwe elisemthethweni le-halakhic kunye nenyani emangalisayo (i-telenovela entle nekrazula iinyembezi).
Ebudeni bengxoxo eyaqhubeka phakathi kwethu emva koko, ndacinga ukuba kufanelekile ukunikela ikholamu kwezi zinto.
Imilinganiselo yeemvakalelo kunye nabantu kwimiba ye-halakhic
Xa ucinga ngale meko kwaye ungene kuyo kancinane kwinqanaba leengqondo, yinto engeyiyo-elula intlekele eyehlela le ntsapho inelishwa (nganye ngendlela yayo, khumbula). Kodwa mna njengomfundi oqhelekileyo andizange ndiyiqaphele kwaphela. Le yingxoxo ye-halakhic enomdla kwaye eyinkimbinkimbi, kwaye kum akukho bantu abahluphekayo apha, oko kukuthi, abantu. Zonke ezi ziyimifanekiso okanye izithunzi kwinqanaba le-halakhic-intellectual. Iinjongo zomlinganiswa zokuqeqesha ingqondo, apho uninzi lwenzelwe ukubonisa izimvo ze-halakhic. Kwisifundo sethu sijongana nababulali, amasela, amaxhwele, amaxoki, iintlekele kunye namashwa ahlukeneyo kwaye konke oku sikuxoxa ngokulingana okumangalisayo. Ngaloo ndlela abantwana baseHyderabad banokufunda imiba enzima, nangona ukulandela ukudibana okunjalo kuyo yonke imeko abazali babo babeya kukhokelwa emva kwentlonipho yokuphila kakuhle kwaye nabo babeya kushiyeka benomothuko wolwimi. Kodwa wonke lo mngcelele udlula ngoxolo kuthi kwaye asibetheli ngenkophe.
Andiboni kula mazwi esilwanyana sakhe ukudelela. Ngokuchasene noko, bayayixabisa ukuphindaphinda phakathi kweenqwelo-moya zengxoxo (umntu kunye ne-halakhic), kodwa nangona kunjalo ndeva ngasemva itoni yokugxeka ukubanda kwengxoxo, oko kukuthi, ukungahoywa kobunzima bobuntu beli tyala. IGemara ilichaza eli tyala ngokungathi sisiqwenga senyama esiwele kwisosi enobisi, kwaye ihlabela mgama ixoxa ngemithetho esebenzayo kwimeko enjalo. Akahoyi tu kwaphela iintlekele zoluntu ezenzeke apha. Le ntsapho ifelweyo isala ingenamfazi (eneneni yenye yeengxaki) kunye nomzalwana abaphuma kwintsapho enye bobabini. Ngubani ohlala apho ukuze axhase iinkedama? (Owu, akukho nyani, kungenjalo ngekungekho cwecwe apha.) Intliziyo Ngubani ongayi kulila kwaye leliphi iliso elingayi kuphalala ekuveni konke oku? Ngapha koko, kwindlebe yomphefumlo wethu ongevayo.
Ndicinga ukuba ingoma endiyivileyo kumazwi esilwanyana sakhe, isekelwe kwinqanaba elincinci kumava am emihla ngemihla kwi-beit midrash kubafundi abagqirha e-Bar Ilan (kunye nakwezinye iisetingi zabasetyhini). Phantse ngalo lonke ixesha sifika kumbandela ololu hlobo, bekukho iimbekiselo ezixengaxengayo ezivela ebantwini nakwixabiso ngakumbi imiba yeemvakalelo yeemeko ezinjalo, kwaye ngokuqinisekileyo ukugxekwa kweGemara nokungahoywa kwabafundi kwezi nkalo. Ukubanda kunye nokungakhathali akubonakalisayo akuqondwa kwaye akunakwenzeka. Sonke siqhele ukufunda umba kayise unikezela intombi yakhe encinci kwindoda ebilisiweyo, ibhinqa eliye lavalwa le nto kwaye, agunot ngaphandle kwendlela yokuphuma, "waxinga eqongeni lakhe" kunye neengxoxo ezingaphezulu zesiLithuanian kwi. iTalmud.
Ndizivumela ukuba ndithethe ngokusuka kumava ukuba ezi ziphononongo ezibonisa abafazi abaninzi (kunye nabalandeli, nto leyo imalunga nento enye. Bona umzekelo kwiikholamu 104 kunye315). Ngokungathandabuzekiyo, abantu baseLithuania abafana nam bakhululwe kwiimvakalelo ezinjalo eBH. Ndingade ndinike ingcebiso kubalawuli baloo telenovela: Umzekelo, baya kwenza kakuhle ukuba nabo baxhele umfazi wesibini womzalwana baze bamhlabe esiswini, ongunina ongumHebhere womzala wentombi yakhe, yena ngokwakhe. Ikhoboka kunye nesiqingatha esikhululekileyo sabulawa nguGarma.Ophakathi kwegama kunye nokuntywiliselwa kwi-mikveh kunye nezigodo ezintathu zamanzi amponlweyo ezingenayo i-dab ekhangeleka njengembonakalo yewayini. Babenokufunda kokona kulungileyo, oko kukuthi, yintoniisikhundla. Oku bekuya kuyiphucula le ngxoxo kwaye ibangele umdla ngakumbi.
Ukugxeka okufanayo komnye umxholo
Ezi zigxeko azibhekiswa kwiTalmud nakubafundi bayo kuphela. Kwikholamu 89 Ndenze umzekelo wokugxeka okufanayo, kwaye ngeli xesha kwimeko yezemfundo-iteknoloji. Ndithetha ibali elaziwayo malunga netyhubhu yegazi kwiTechnion (ekusenokwenzeka ukuba yayikhona kwaye yadalwa). Ndizakukopa izinto kwalapho.
uxelelwe Kwinyathelo likaProf. Haim Hanani weTechnion, elakhokelela kuvavanyo lokuhamba kwiFaculty of Mechanical Engineering, abafundi bacelwa ukuba bayile umbhobho owawuza kuthwala igazi ukusuka e-Eilat ukuya eMetula. Babuzwa ukuba yeyiphi imathiriyeli yokwenza, ingakanani ububanzi kunye nobukhulu bayo, bubuphi ubunzulu bomhlaba wokuwungcwaba kunye nokunye. Ababalisi beli bali (kwaye nam ngokwam ndikhe ndeva ngeendlebe zam ezikhwankqisayo abanye abantu ababekhwankqisiwe ngukuziphatha kwalo mcimbi. Akufuneki ndithethe ndothuswe ngokwenene kukothuka kwabo) bakhalazela indlela abafundi beTechnocratic, abathi kudala balahleka. umfoti womntu (ngokungafaniyo neePhD ngokwesini kunye noqoqosho lwasekhaya Banobuntununtunu bokuziphatha obuphuhliswe kakhulu, ngakumbi xa beyila ityhubhu eya kubakhokelela amanqaku abo ngokuthe ngqo kwiinkqubo zeeJenali), basombulule uviwo kwaye bangenise ngaphandle kokubetha ijwabu leso kwaye ukubuza ukuba kutheni kufuneka umbhobho wegazi onjalo. Ukwandisa nje umnqa, uthi kuthiwa uviwo olulolu hlobo lwakhokelela ekubeni kuqaliswe izifundo zobuntu kwizifundo zeTechnion. Kuyabonakala ukuba umntu waluthatha ngokunzulu olu hlaziyo.
Ngaphaya kombuzo wencasa kunye noburharha bombhali weemviwo onokuthi ngokuqinisekileyo kuxoxwe ngawo (nangona emehlweni am kumnandi kakhulu), ukugxeka ngokwako kubonakala kububudenge kum. Yintoni ingxaki ngombuzo onjalo?! Kwaye nabani na ucinga ukuba umhlohli unenjongo yokucwangcisa inkampu yoxinaniso kwaye uncedisa abafundi ekusombululeni ingxaki yokuthutha igazi? Abafundi abasombulule uviwo bekufanele ukuba bacinge ukuba le yimeko kunye noqhanqalazo? Ukwakhiwa kunye nesisombululo sovavanyo olunjalo alubonakalisi ukuziphatha okubi nangayiphi na indlela, kunye nenqanaba lokuziphatha kokuziphatha komhlohli okanye abafundi. Ngendlela, kwanolu gxeko luhlekisayo alubonakalisi umgangatho ophezulu wobuntununtunu bokuziphatha. Ubukhulu becala yintlawulo yerhafu echaziweyo, kwaye ibubudenge, yokuchaneka kwezopolitiko kunye novelwano olungeyomfuneko.
Ngaphandle kombuzo wokuba ngaba kulungile kwaye kunengqiqo ukuveza umbuzo onjalo kuvavanyo, ndingathanda ukuxoxa ukuba abafundi abadibana nayo kwaye bayisombulula ngaphandle kokuqhwanyaza kweliso bafana kakhulu nabaphengululi be-halakhic abahamba kwimeko efana le bendiyichaza ngenkophe yomkhenkce. Ngumbuzo womxholo. Ukuba umxholo we-halakhic okanye ubuchwephesha besayensi, kwaye kucacile kuye wonke umntu ukuba akukho mntu unenjongo yokubulala okanye ukuthwala igazi, akukho sizathu ehlabathini sokuba iintliziyo zabo zingcangcazele okanye zivuye ngayo. Bazishiya ngcono iitshekhi zeziganeko zokwenyani. Ukuba kukho umntu oneentambo ezishukumayo kulungile. Wonke umntu kunye nokwakheka kwakhe kwengqondo, kwaye njengoko sisazi ukuba akukho mntu ufezekileyo. Kodwa ukubona oku njengophawu olubonisa ukuziphatha komntu kwaye xa ukungabikho kokungcangcazela kubonisa le migaqo yokuziphatha ephosakeleyo kakhulu ihlaya elibi.
"Umkhenkce ebekrelekrele, yintoni le ebeyibona bububhanxa?"
Omnye unokukhumbula kwakhona i-midrash yentsomi kaKoraki Zatzokal owakhalaza ngoMoshe Rabbeinu (Umfuni olungileyo, Iindumiso a):
“Esihlalweni sikaZim” kukho umkhenkce, owawuqhula ngoMoses noAron
Wenze ntoni umkhenkce? Labuthelana lonke ibandla, kwathiwa, Ibandla lonke malibaqokelelele umkhenkce, waqala ukuthetha kubo amazwi aphuhlileyo, wathi kubo, Elumelwaneni lwam kukho mhlolokazi umnye, enenkazana ezimbini eziziinkedama; waba nentsimi enye. Weza ukulima. Wathi uMoses kuye, Uze ungalimi inkunzi yenkomo ne-esile kunye. Weza kuhlwayela - wathi kuye: "Isifuba sakho asiyi kuhlwayela imixube." Weza kuvuna, wenze imfumba, wathi kuye, Beka ingqokelela yokulibala kunye newigi. Weza ukwenza isiseko, wathi kuye, Yenza umnikelo, nesahlulo seshumi sokuqala, nesishumi sesibini; Wasithethelela isigwebo kuye wamnika sona.
Lenze ntoni eli hlwempu? Wema wathengisa intsimi wathenga iigusha ezimbini zokunxiba iiyasuyasu zabo zonwabele iinkomo zabo. Bakuba bezelwe, uAron waya kuye, wathi kuye, Ndinike amazibulo; wathi uYehova kum, Onke amazibulo athe azalwa phakathi kwempahla yakho emfutshane, nempahla yakho emfutshane engamaduna, wangcwalisela uYehova uThixo wakho. Wathethelela isigwebo kuye waza wazala umntwana. Lifikile ixesha lokuba bachebe, bachetywe; weza uAron wathi kuye, Ndinike ingqalo yegesi leyo, njengoko watshoyo uThixo.
Wathi, Andinamandla okumelana nalo mntu, ngokuba ndiyawaxhela, ndiwadle. Wathi ekuzibulaleni kwakhe, weza uAron, wathi kuye, Ndinike ingalo, nesidlele, nesisu. Athi: Nasemva kokuba ndizixhelile, andizange ndimlahle – zindigwayimba! Wathi uAron kuye, Ukuba yeyam yonke, utsho uYehova ukuthi, Konke ukunyhasha kwaSirayeli koba kokwakho. UNatlan waya kuye wemka elila yena neentombi zakhe ezimbini.
Wangena njani ke kule ntlupheko! Ngoko benza kwaye babambelela kuThixo!
Ibuhlungu ngokwenene, akunjalo? Isikhumbuza kancinane uphononongo endiluchaze ngasentla, nangona kukho umahluko apha nangona kunjalo. Ukugxeka kukaMkhenkce kukho ngokwenene kuyo. Unokukhupha izinto ngokomxholo kwaye enze ibali elibuhlungu, kodwa ngokuqinisekileyo liyinyani ukuba ibali elinjalo linokwenzeka ngomgaqo, kwaye ngokwenene lo ngumyalelo we-halakhic kwimeko enjalo. Yiyo loo nto kukho umngeni apha ekuziphatheni kwe-halakhah, kwaye eli libango elinzima. Ndikukhankanye amaxesha amaninzi ngaphambili USirayeli wadlala, Ingcali yemichiza yaseYerusalem, eyayidla ngokuyila amabali angokuziphatha okubi kwe<em>halakhah nonqulo, yaye ixhokonxa uqhushululu. Inkolo yaphefumlela phezulu xa kucaca ukuba ibali elinjalo alizange lidalwe, kodwa ndandisoloko ndizibuza ukuba kutheni libalulekile. Ngokwenene i-halachah iyakwalela indawo yeShabbat ukusindisa ubomi beentlanga. Ngokwenene, umthetho ufuna ukuba umfazi kaCohen adlwengulwe ngumyeni wakhe. Ngoko nokuba akwenzekanga ngokwenene, kukugxekwa okusemthethweni ngokupheleleyo.
Ngaloo ndlela, izigxeko zikaShakak noKora zifana kakhulu nezigxeko esizibonile ngasentla ezijongene netyala elicingelwayo kunye nokulingana okusengqiqweni kuye. Ayinanto yakwenza nomgangatho wokuziphatha kwabantu okanye wehalakhah.
Makhe sigxininise kwiingxaki ngokuphononongwa kwetyhubhu yegazi okanye i-telenovela kwinqanaba. Le yimeko ecingelwayo engazange yenzeke ngokwenene. Xa sijongene nemeko yokwenyani, ndiyaqikelela ukuba asiyi kuhlala singayikhathalelanga. Ukungakhathali kudalwe apha ngenxa yobume bentelekelelo yetyala elicacileyo kubo bonke ababandakanyekayo, nangenxa yomxholo wengxoxo. Intsingiselo apho la matyala avela khona yingqondo-yobuchwephesha. Umbuzo kubunjineli utolikwa kumxholo wawo njengomngeni we-computational-teknoloji, kwaye ngokufanelekileyo akukho mntu ukhathazwa yinjongo yokubala (kuba kucacile kuye wonke umntu ukuba akukho nto enjalo. Enyanisweni kukho, ukuvavanya umfundi izakhono). Kukwanjalo nakwi-telenovela eqongeni. Kucacile kubo bonke ukuba le yimeko ecingelwayo eyenzelwe ukulola ukuqonda kwe-halakhic. Ukunyanga i-hypothetical case ngokungathi yenzeka ngokwenene ngumcimbi wobuntwana, akunjalo? Abantwana badla ngokuphatha ibali ngokungathi yinto yokwenyani. Abantu abadala kufuneka baqonde ukuba oku akunjalo. Ngokombono wam, oku kufana nemibuzo malunga neemeko zeTalmudic ezifana neGamla Farha ( Mechot XNUMX: XNUMX kunye neYevamot Katz XNUMX: XNUMX ), okanye uHittin owehla emahlathini ( Minchot Set XNUMX: XNUMX ), ngubani ozibuza ukuba imeko enjalo ingaba njani. kwenzeke. Xa kunikelwa ingqalelo kumongo, kufanele kucace ukuba akukho mntu uthi oku kwakunjalo okanye kusenokwenzeka. Ezi ziimeko ezicingelwayo ezijolise ekucokiseni imigaqo ye-halakhic, njengamatyala aselabhoratri kuphando lwezenzululwazi (bonaAmanqaku Kwi-Okimas).
Ngamafutshane, ingxaki ngolu phononongo kukuba bacinga ukuba umntu ufanele aphathe ityala elicingelwayo eliza phambi kwakhe ngokungathi kukho isiganeko sokwenyani apha. Unokunika umzekelo kwimuvi okanye incwadi echaza iimeko ezinjalo. Phawula ukuba ngubani ongayixabisanga iBhayibhile okanye ayibone imeko enjalo. Yahluke njani? Ngapha koko, kwimuvi okanye kwincwadi sifanele sibe neemvakalelo ezinjalo size singene kwimeko ethile. Impendulo kule ngombono wam: 1. Igama lomxholo ngubugcisa, oku kuthetha ukuba umthengi (umbukeli okanye umfundi) kufuneka azame ukungena kwimeko kwaye abe namava. Lo ngundoqo wokubaleka kobugcisa. Kodwa ayikho kwimeko yezifundo okanye itekhnoloji-yezemfundo. 2. Nangona kungokwemvelo ukuba ukunyakaza kwengqondo okunjalo kwenzeka kumadoda (okanye kwabasetyhini), akunaxabiso. Ukuba oko kuyenzeka - kulungile (akukho mntu ufezekileyo, khumbula). Kodwa ibango elivela kubantu egameni lokuziphatha ukuba kufuneka kwenzeke kubo libango elahluke ngokupheleleyo. Ukubona umntu ongenayo le nto njengesiphene sokuziphatha bubuvuvu ngokwenene emehlweni am.
Iimeko zangempela: ukubaluleka kokuqhawula
Ndaxoxa ngelithi ukubandakanyeka kwengqondo kwimeko yoqikelelo ngumbandela wobuntwana nokona kulungileyo. Kodwa ngaphaya koko, ndingathanda ukuxoxa ngoku ukuba nayo inomlinganiselo oyingozi kuyo. Xa izigxeko ezikhankanywe ngasentla zabafundi abagqirha zavela, ndazama ukubethelela kubo ngokuphindaphindiweyo ukubaluleka kokuphazamiseka kwengqondo kunye nengqondo kwimeko xa ujongene ne-halakhic scholarship. Ukubandakanyeka okunjalo ngokweemvakalelo akunaxabiso kuphela, kodwa kuyingozi ngokwenene. Ukubandakanyeka kwengqondo kunye neemvakalelo kunokukhokelela kwizigqibo ze-halakhic eziphosakeleyo (kunye nezobuchwepheshe). Umgwebi ogqiba ityala ngenxa yeemvakalelo zakhe ngumgwebi ombi (enyanisweni, ayilawuli konke konke. Khala nje).
Qaphela ukuba apha sele ndithetha ngokubhekisela komntu kwimeko yokwenyani ezayo phambi kwam, kwaye kungekhona nje imeko eqikelelwayo. Ukuba ndidibana nemeko yomzalwana kunye nodade abaye babhubha kunye kwintlekele embi, yimeko yokwenyani eyenzeka ngokwenene, ngoko ke kwimeko enjalo kufuneka kube nexabiso lokukhathazeka malunga nemilinganiselo yabantu kuyo. Apha ngokuqinisekileyo kukho ixabiso kunye nokubaluleka ekuphatheni eli tyala kuwo onke amanqanaba ngaxeshanye: i-intellectual-halakhic, i-intellectual-moral kunye namava omntu. Kwaye nangona kunjalo, nakwimeko yokwenyani, kufanelekile kwinqanaba lokuqala ukugxila kwinqwelomoya yokuqala kwaye uhlukanise ezinye ezimbini. Umlamli kufuneka acinge ngokupholileyo ngetyala eliza phambi kwakhe. Into ethethwa yi-halakhah ayinanto yakwenza nento ethethwa yimvakalelo (kwaye ngokombono wam hayi noko ukuziphatha kuthethwayo), kwaye kulungile ukuba iyenze. Umlamli kufuneka awunqumle umthetho ngokuzola, aze ngaloo ndlela abe nelungelo lokwalathisa inyaniso yeTorah. Kwinqanaba emva kokuhlalutya kwe-halakhic ebandayo, kukho indawo yokungena ngengqondo kwimeko kunye nemilinganiselo yokuziphatha kunye nobuntu, kunye nokuyihlolisisa kule mibono ngokunjalo. Oku kuthetha ukuba xa uhlalutyo lokuqala lwe-halakhic luphakamisa iinketho ezininzi ezinokwenzeka, umntu unokuqwalasela iimvakalelo kunye nobukhulu bomntu kunye nokuziphatha ukuze enze isigqibo phakathi kwabo kwaye ukhethe umgaqo osebenzayo. Uvakalelo akufunekanga luthathe inxaxheba kuhlalutyo olunengqiqo, kodwa uninzi luze emva kwayo. Ngaphandle koko, unokubona ukubaluleka kokwabelana ngokwenene kunye novelwano kunye nokubandezeleka komntu ophambi kwakho, nokuba ayinayo impembelelo ye-halakhic. Kodwa konke oku kufuneka kwenzeke kwiinqwelomoya ezihambelanayo, kwaye kukhethwa ukuba kube kade kwisigqibo sokuqala se-halakhic. Ukubandakanyeka ngokweemvakalelo kwisigwebo akunqweneleki kwaphela.
Andiyi kubuyela apha ngokweenkcukacha kwelinye ibango esele ndenze amaxesha amaninzi (jonga umzekelo kwikholamu 22, Kwaye kuthotho lweekholamu 311-315), Ukuba ukuziphatha akunanto yakwenza nemvakalelo kwaye akukho nto. Ukuziphatha ngumbandela wobukrelekrele kunokuba ube ngumcimbi ongokweemvakalelo. Ngamanye amaxesha uvakalelo luphawu lwesikhokelo sokuziphatha (uvelwano), kodwa luphawu oluyingxaki kakhulu, kwaye kubalulekile ukuba uqaphele ukuyigxeka kwaye ungayilandeli. Mhloniphe kwaye umkrokrele. Ekupheleni kosuku, isigqibo kufuneka senziwe entloko hayi entliziyweni, kodwa intloko kufuneka ithathele ingqalelo into ethethwa yintliziyo. Ingxabano yam yayikukuba ukuchongwa kwimeko yovakalelo olunamava akunantsingiselo. Olu luphawu lomntu, kwaye luyinyani. Kodwa ayinaxabiso, kwaye abo bangayinikwanga abafanele bakhathazeke ngemeko yayo yokuziphatha nexabiso.
Ngenxa yoko, ndixela ukuba nakwinqanaba lesibini, emva kohlalutyo lokuqala lwe-halakhic, akukho ndawo ibalulekileyo yemvakalelo. Ngokuziphatha mhlawumbi ewe, kodwa kungekhona imvakalelo (nge-se. Kodwa mhlawumbi njengesalathisi kunye nokunye). Ngokwahlukileyo koko, ukubandakanyeka ngokweemvakalelo kungummiselo wovavanyo lwenkohliso engafanelekanga nokutenxa ekucingeni, nokwenza izigqibo eziphosakeleyo.
Isiphetho kuko konke oku kukuba xa ufunda umba we-halakhic weTalmudic akukho xabiso ekubandakanyekeni ngokweemvakalelo, kwaye umntu makazame ukoyisa loo ntshukumo yengqondo nokuba ikhona (ndithetha ngabo bangekakwazi ukoyisa. yona kwaye uyiqhele). Kwizigqibo ezisebenzayo ze-halakhic (o.k.t isigqibo kwityala elithile eliza phambi kwethu), apho imvakalelo kunye nokuziphatha kufuneka kunqunyanyiswe, kwaye mhlawumbi kunikwe indawo ethile kwinqanaba lesibini (ingakumbi ukuziphatha. Ukuvakalelwa ngaphantsi).
Kukho ingxabano kwinqanaba lesixhobo sokuba umntu oqhelisela ukunyanga abantu nge hypothetical kwiimeko ezinjalo akayi kwenza okufanayo ngokumalunga neemeko zangempela. Ndiyathandabuza kakhulu. Kum ivakala njengelizwi elilungileyo leentsikelelo ezisixhenxe, kwaye andiboni nto ichanekayo. Kuyo nayiphi na imeko, nabani na othi oku ufanele azise ubungqina kumazwi akhe.
Ibango elifanayo mhlawumbi linokwenziwa malunga nomkhwa wamagcisa. I-Gemara ithi igcisa, ugqirha okanye umntu ojongene nabasetyhini, "ebukhoboka baxhatshazwa", ngoko ke wamvumela izinto ezingavumelekanga kwamanye amadoda (ubunye okanye ukudibanisa nomfazi kunye nokunye okunjalo). Ukuxakeka kumsebenzi wakhe wobuchwephesha kuthoba iimvakalelo zakhe kwaye kuthintele ubugwenxa kunye nokucamngca okungavumelekanga. Andazi ukuba isondo se-gynecologist sibuhlungu ngenxa yoko, nangona xa edibana nomfazi kwimvelaphi yothando kunye neyokungazi. Ndiyathandabuza ukuba le yimeko eyahlukileyo, kodwa ifuna uviwo. Abantu bayayazi indlela yokwenza ukwahlukana kunye nokuqhawula, kwaye ngale ndlela u-Dayan ufunda kwi-Abidathiyahu Tridi. Xa umntu ezibandakanya kumsebenzi wakhe uyayazi indlela yokuzibamba iimvakalelo zakhe, kwaye oko akuthethi ukuba zibuthuntu ngakumbi kwezinye iimeko. Ngokuqinisekileyo, umculi oxakeke ngobugcisa bakhe yimeko efikeleleke ngakumbi kuneemeko ezikhankanywe ngasentla kwisifundo se-halakhic, ekubeni kumculi aba ngabasetyhini kunye neemeko zangempela, ngelixa kumfundi ezi ziimeko ezicingelwayo. Ngoko ke, nokuba sifumanisa ukuba iimvakalelo zomculi ziyancipha, oku akuthethi ukuba le yinto eyenzekayo kwisifundiswa. Mhlawumbi ifana ngakumbi nomgwebi ongazichaziyo iimvakalelo zayo, ekubeni ijaji ijamelana namatyala okwenene kodwa oko ikwenza ngobuchule. Apho kunokuthiwa kubugcisa bakhe ukhathazekile.
Kunokuthiwa umfundi odibana neemeko ezinjalo kwaye angavusi kuye iimvakalelo zobuntu ezifanelekileyo akayingeni ngokupheleleyo imeko. Le yingxabano echasene naye kwinqanaba lezemfundo, kwaye kungekhona kwinqanaba lokuziphatha. Ibango lelokuba akafundanga kakuhle kungekhona ukuba ungumntu oziphethe kakubi. Andiqondi ukuba kunjalo. Ngokuqinisekileyo umntu unokungena kwimeko kwimeko yemfundo nokuba akakho kuyo ngokobuntu. Ingxabano yam, ngokuqinisekileyo, ixhomekeke kwimbono ye-halakhah njengomsebenzi wobugcisa-ubugcisa obungabandakanyi iindiza zengqondo (ngaphandle kwesigaba sesibini, njl.). Ngapha koko, isiphene sokuziphatha ngokuqinisekileyo andisiboni apha.
 Andiqinisekanga ukuba inento yokwenza nomlinganiswa obhinqileyo. Oku kusenokubangelwa bubutsha bezinto, njengoko abafazi bengaqhelekanga ukuqhelana nale miba ukususela ebuntwaneni.
 Isiphumo ngokwaso samkelekile kwimbono yam. Ngokuqinisekileyo ayiyongozi kubafundi beTechnion ukufunda ngobuntu. Kodwa akukho nxu lumano phakathi koku kunye nemeko yomthambo wegazi. Ityala alibonisi nayiphi na ingxaki efuna ukusonjululwa, kwaye ukuba bekukho ingxaki enjalo, izifundo zobuntu bezingayi kuba negalelo nangayiphi na indlela kwisisombululo sayo.
 URashi entlango XNUMX, iphe.
Impendulo kwi-Absolutes kuThixo
Impendulo kwilizwe lamaYuda
Impendulo yokuba akukho bango malunga nehlabathi elingenakuphikiswa
45 Iingcamango “Ngengqondo neNtliziyo-iimvakalelo kwiSifundo kunye nesiGqwebo seHalacha (Uluhlu 467)”
T. ngo-Nissan 10 - 04/2022/01 ngo-56:XNUMX
Lo mcimbi we-halakhic okhankanywe apha wagwetywa ngokwenyani, ukuba ndikhumbula kakuhle, emva kokubulawa kwamalungu osapho lakwaMaklef eMotza ngexesha leziganeko zowe-XNUMX.
Ishumi elinesibini likaNissan 13 - 04/2022/14 ngo-39:XNUMX
Uxolo bendingalunganga, ndibhekisa ekubulaweni kosapho lakwa-Unger eSafed, enye yeempendulo kwi-Ahiezer HG Lag.
Ishumi elinesithathu likaNissan 13 - 04/2022/14 ngo-53:XNUMX
Uzifumana njani iimpendulo? Ndingathanda ukubona umthombo. Enkosi.
Ishumi elinesithathu likaNissan 13 - 04/2022/17 ngo-23:XNUMX
Ndiza kushwankathela ngokufutshane oko kwathethwa apho.
A. Imeko evele kuluhlu:
[Indoda yatshata umtshana wayo kunye nomnye umfazi. Ukuba uthe wafa umntakwabo akakwazi ukuhlala nomtshana wakhe (i-pubic) kwaye ke yena kunye nomnye umfazi osweleyo bakhululwe ekukhupheni isisu kunye nebheyile (ukukhupha isisu okungavumelekanga). Ukuba intombi yomtshana wakhe yafa ngaphambi komyeni wayo ize ke indoda yakhe isweleke, ngoko ke ngelo xesha lokufa kwayo omnye umfazi akangowasetyhini ngoko kufuneka abe nomntwana.]
Isigwebo esikwiGemara sithi xa umntu akazi ukuba ngubani owafa kuqala, indoda yafa kuqala nomfazi wayo (umtshana wakhe) esaphila aze omnye umfazi abhubhe ngamasikizi, okanye kufe umfazi kuqala kwaze kwasweleka indoda, emva koko omnye umfazi unetyala lomntwana. [Kwaye umthetho kungenxa yokuba kukho intandabuzo malunga nokuba kunyanzelekile na kwiBibom okanye kwalelwe eBibom ke ihempe hayi iBibum].
B. Imeko kaAhiyezere:
[Indoda eswelekileyo yaze ngexesha lokufa kwayo yashiya amadlozi aphilayo okanye isibeleko inkosikazi yayo ikhululwe kumasikizi. Kodwa ukuba ayibanga namntwana, okanye bafe bonke abantu ngaphambi kokuba ife, umfazi wayo makabe nexhala. Ukuba ithe yafa yashiya imveku ezelwe emva kokufa kwayo yaze yaphila iyure enye kuphela yaze yafa, okanye yashiya unyana ofayo, yimbewu yayo yonke into kwaye umfazi wayo ukhululwe kumasikizi.]
Ibanjwa ngo-Ahiyezere nguyise owafayo kwaye ngexesha lokufa kwakhe washiya inyamakazi efileyo ngosuku olulandelayo emva koyise, nokuba unyana odla inyama ugqalwa njengembewu yayo yonke into njengokufa kwaye umfazi ofileyo ukhululwe kumasikizi, okanye i-carnivore (eya kuthi mhlawumbi isweleke kwiinyanga ezili-XNUMX). [I-Rose Garden icinga ukuba ukuxhwaleka akuthathwa njengokuphila konke konke kwaye kubi kunokufa kwaye umfazi ofileyo kufuneka abe yi-bibom. U-Ahiezer ungqina kwezongezo zokuba uBen Tripa wagxothwa eMaybum]
Kukho ukufana kwinto yokuba amalungu amabini osapho asweleke ngexesha elifutshane (ngesizathu esifanayo).
Ishumi elinesithathu likaNissan 13 - 04/2022/17 ngo-27:XNUMX
Eli sele liphepha lanamhlanje 🙂
Ishumi elinesithathu likaNissan 13 - 04/2022/19 ngo-06:XNUMX
Ndicinga ukuba uNadav ubhekisa kwimpendulo ka-Ahiyezer kuHG embindini weCJ:
Ngenyanga ka-Adar ka-XNUMX (c) kumbuzo kaDarg owathi ngemihla yokugetyengwa kukayise wabulawa eIraq kwaze kwalandela unyana owayephila ngenye imini, abathi ababulali bamgwaze bagqobhoza imiphunga, ukuba kuvunyelwene. ukutshata ngaphandle kokukhutshwa, njengoko kwi-Ginat Vardim responsa I-Sephardi yaziswa emadolweni kaYosef noHarka'a kunye nasePetah Tikva, enokuthi ibe nzima.
Apha ndabona kwii-responsa ze-Ginat Vardim kwaye andizange ndifumane ubungqina apho ukuze ndihlaziywe, kuphela kwinkolo yaseMatanitin efa kwaye ikhokelwa kwaye ingeyena uTani Prefa, oku kuthetha ukuba iDetrapa ayigxothwa. Nangona kunjalo, ukusuka kwiToss D. Kwaye ngokubhekisele kwi-Toss, kubonakala ngathi wayefa yindoda echazwe kwiSanhedrin yiDalarbanan Darbav Hoy njengexhoba, kwaye ke uMaimonides kwi-PB evela kumbulali uDahurgo akabulawanga njengexhoba, kwaye ngomnye uDemprashim GC. UDa'af olinganisiweyo kwaye uyafa. Kwaye kukwacacile ukuba izindlu ze-Hari Batos Yavmot, apho i-Demguide ikwindawo apho kungekho siphelo sobomi, kunye nakwi-B.H. A.H. Ngapha koko, bungqinwa kumazwi kaToss, imodeli efayo kwaye ikhokelwa ngumntu onjengexhoba, kwaye ke kuhlaselo olukwiKur'an kaDavide, oluhlonyelwe kwiS. Ungakhathali nokuba ulahlekelwa yintoni na, kuba abafayo nabakhokelayo bafuna ibhabhi kwaye bagxothwe ebhibhini. Ngokubanzi, kuyamangalisa ukuba ukuba umzukulwana womzukulwana uthatha i-faiture ukuba uya kufuna ukuhlangulwa, kwaye kuya kubakho ukukhupha isisu kumfazi womzalwana ononyana ohluthiweyo kwaye ekubeni weza namazwi I-Toss Reid nge-Shabbat i-KK ngokuqinisekileyo ayifanelanga ukuvakala konke konke ngenxa yamathandabuzo othandabuzayo, kwaye ayifuni kuhlangulwa kwaye uvunyelwe ukuba atshate. + Shum eBeit Yitshak impendulo, Chiv. A.A. kwimpendulo yeBeit Yitzchak Kha'a Shatma G.K.
Kodwa oku akusiyo imeko yethu. Ngelixa umntu unokuchukunyiswa yindlela yonyango kunye nokungabikho ngokupheleleyo kwereferensi kwimilinganiselo yeemvakalelo.
Ishumi elinesithathu likaNissan 13 - 04/2022/19 ngo-31:XNUMX
[Ngokuphathelele ekupheleni kwamazwi akho malunga nendlela yonyango, ukhenketho lweNdyebo yoBulumko lubonisa ukuba umbuzo ovela ku-Ahiezer nguRabbi Zvi Pesach Frank owabuzwa ngayo ngurabhi waseSafed apho isiganeko senzeke khona, kwaye sele sele wavakalisa umothuko, njl.
Okomzuzwana ndacinga ukuba ingafana nebali lemihla ngemihla lombingeleli owabulala umhlobo wakhe enkunzini yegusha, kwaye ngaphezu koko utata wakhe wabhabhazela exoxa ngokucoceka kwemela, malunga nokuba ngawaphi amanqaku kunye neentshumayelo ezibhaliweyo, kodwa. ayifani kwaphela kuba kukubulala iintshaba.
Phakathi kwempendulo ye-halakhic kunye nentshumayelo ye-eulogy
Ishumi elinesithathu likaNissan 13 - 04/2022/23 ngo-57:XNUMX
Ngomhla we-XNUMX kuNisan XNUMX (kaRabbi uYosef Caro)
Ingxoxo yonke yeemvakalelo okanye ukungabi namvakalelo kwabalamli beHalacha ngesiseko sokuqulunqwa kwabo kwiimpendulo zabo - ayibalulekanga. Izilumko zivakalise uchulumanco ngokubizelwa kweziganeko kwiintshumayelo zazo ekuhlaleni, nebezijoliswe ukuvusa iimvakalelo kubaphulaphuli. Kwimpendulo ye-halakhic ingxoxo i-halakhic 'yomileyo'. Yalawula ngokwahlukeneyo kwaye yafuna ngokwahlukeneyo.
Kuyaphawuleka ukuba kuphela imisebenzi embalwa yezilumko zakwaSirayeli eyashicilelwa, ngokuyinxenye ngenxa yeendleko zokushicilela. Ke ngoko, zama ukuprinta ukhetho olunotshintsho olubalulekileyo. Nokuba yinto entsha kwi-halakhah okanye yinto entsha kwintsomi. Ukuvakalisa iimvakalelo zovuyo ngenxa yeendaba ezilungileyo kunye nosizi ngenxa yamahemuhemu amabi - akukho nto intsha, wonke umntu uyayiva, kwaye akukho mfuneko yokuyandisa ngelixa udibanisa amaphepha. Nakwizinto ezintsha baprinte kancinci kancinci.
Molo, umfana omncinci.
Ukulungiswa kunye namagqabantshintshi
Ishumi elinesithathu likaNissan 14 - 04/2022/00 ngo-06:XNUMX
Umhlathi 1, umgca 1
… Ngokusekwe kumagama abo…
Kufuneka kuqatshelwe ukuba maxa wambi inguquko ithatha ixesha elide kumazwi osizi, xa ubani enyanzelwa ukuba alawule ngqwabalala. Xa umlamli evakalelwa kukuba nangona umnqweno wakhe omkhulu akakwazi ukugcina - ngoko ngamanye amaxesha uya kubonisa intlungu yakhe ekulawuleni kwakhe.
Ngokomzekelo, uRabbi uChaim Kanievsky wayala ngokufutshane isikhundla sakhe ngamagama ambalwa, kodwa uRabi uMenachem Burstein wathi kukho iimeko apho uRabbi Kanievsky wathi: 'Oh, oh, oh. Andikwazi ukuvumela '.
T. ngo-Nissan 10 - 04/2022/07 ngo-25:XNUMX
Into efanayo xa enye iphosakele yabuza uRosh Yeshiva ukuba bajongana njani nomcimbi wePP ngaphandle kokuba babangele ukuvuswa ngokwesondo. Uphendule wathi abafundi abajongani nenyani, kodwa kunye nemilinganiselo ye-halakhic malunga nayo.
Ngokwenene impendulo engaqhelekanga, kuba inkcazo kwiMishnah ayiso "senzo esasikho".
Yaye ngaphantsi koko, uShlomi Emuni Yisrael, ekhokelwa ngabaphengululi abafundayo, bahlanganisana ukuze bancede iintsapho.
T. ngo-Nissan 10 - 04/2022/07 ngo-27:XNUMX
Le miba ifana "novavanyo lokuphahlazeka" kwiimoto, ukuvavanya ukuxhathisa kwiimeko ezinzima. Asikuko nokuba siqinisekile ukuba yonke imoto iya kudlula into enjalo endleleni
T. ngo-Nissan 10 - 04/2022/08 ngo-29:XNUMX
A. Uhlalutyo lwakho luphosakele ngokupheleleyo uburharha kumazwi am (kunye ne-doc: i-telenovela! Ngaphakathi kwesiseko sedatha esimangalisayo seskripthi esibonelelwe linqaku, ungabhala ngakumbi.).
B. Sobabini kunye nabafundi bakho abagqirha (abo bangekho kumanqaku eejenali-zesayensi-ukuzisola, okanye abafunda kwiSebe le-Macrame kunye ne-Home Economics. Ngubani owathi ukuthanda izinto eziphathekayo kunye ne-chauvinism kwaye akayamkela?) Qonda kakuhle umgangatho ophindwe kabini . Njengoko sele kukhankanyiwe, abanye bethu bade bayonwabele. Enyanisweni, uninzi lwethu ludibana nemiba ye-gemara yolu hlobo okokuqala, kwaye kubonakala kum ukuba umfundi onobuchule kunye noqhelekileyo unokuxhamla kuphela kwimbono yethu emangalisayo kunye nentsha ("yangaphandle") ngokuchanekileyo ngenxa yokuba i-primordial kwaye ingaqhelanga kwaye. ukujonga rhoqo. Ukukwazi okunempilo ukujonga izinto ngokutsha kubalulekile kumntu wonke. Musa ukoyika, abaphengululi abangcono kunye nabagwebi (kungekhona i-transgender) baphume kuyo.
Isithathu. Nangona kunjalo, umphengululi we-dayan kunye nejaji ngenene akufuneki ukuba akhale ngokukrakra kwaye asuse iinyanda zezicubu ngelixa efunda, endaweni yoko asebenzise ingqondo kunye nokukwazi kwawo ukuqiqa nokufunda. Ndithetha (ndithetha) malunga nenkangeleko ephindwe kabini kwaye enempilo. Ewe, nokuqhwanyaza kuyasebenza. Hayi nje inyembezi.
D. Akayi kuba ngumbingelelikazi na njengomgcini wendlu yabahambi? Phuma uye kufunda ukuba izigwebo zabagwebi beNkundla ePhakamileyo zikhangeleka njani na, ngenxa yezikhundla zabo, zilungise imiba ebalulekileyo ngamanye amaxesha ekwabhekiselele kwiintlekele zolunye uhlobo okanye olunye. Uhlalutyo olungokomthetho luya kubakho kubo bonke ububukhali balo, yaye ngaphandle kokuphambukisa kububukhali bengxubusho, kuya kusoloko kukho intshayelelo emfutshane okanye amabinzana ahambisana nawo aya kunxulumana nexabiso necala lokuziphatha.
uThixo. Umbuzo wemilambo yegazi kunye nombhobho ngumzekelo omhle wokuhleka okubi. Ichaphazela ingxoxo eqhubekayo ekhoyo apha, malunga nokudelela kunye nokungabikho kokubaluleka komxholo, umoya kunye nemfundo.
T. ngo-Nissan 10 - 04/2022/09 ngo-31:XNUMX
Molo silwanyana sakhe.
A. Andizange ndiphoswe ngokwenene. Ngokuchasene noko, ndabhala malunga nokuncoma kunye nokonwabela ukuphindaphinda kwaye ndawaqonda kakuhle uburharha. Kwaye ke ukusuka kwi-shit ndaqonda ukuba kukho ithoni yokugxeka, kwaye ngokuqinisekileyo ndandinyanisile. Iintetha zakho apha ziyichaza ngokucacileyo le nto. I-gemara iyonke ayibandakanyi isingeniso sembongo senguqulo yeCheshin.
B. Ngokuqinisekileyo ngumbono onokuthi uzuze kuwo, kodwa ngokuqhelekileyo awufumani nzuzo kwinqanaba le-halakhic. Ndiphawule ngale nto ekupheleni kwekholamu. Ndigxila ekugxekweni okungenamsebenzi.
Isithathu. Ndabona ukuba kujongwe kabini, kwaye ndayilungisa loo nto. Umbuzo endijongene nawo kukuba ukungabikho kwendiza yesibini ngokubhekiselele kwimeko ye-hypothetical kufuneka ibe yinkxalabo okanye cha.
D. Abagwebi beNkundla ePhakamileyo, ngokungafaniyo nabalamli, baxhalabele umthetho hayi i-halakhah. Ngokomthetho kukho ubunzima ngaphezu kwe-halakhah (akusoloko kufanelekile) kwiimvakalelo zabo. Ngaphandle koko, i-Jurisprudence ye-Halachic ijongene namatyala asebenzayo, iGemara ayifuni. Ngokwam amazwi ndimele olu lwahlulo.
uThixo. Ndakhankanya ukugxekwa koburharha obubi, kwaye ndatsho ngokucacileyo ukuba ayisiyiyo le nto ndijongene nayo. Umbuzo ebendijongene nawo ngowokuba ingaba kukho indawo yokugxekwa ngokuziphatha.
Okokugqibela, isityholo se-substantivity kunye ne-chauvinism iqhelekile kwaye ayibalulekanga (idla ngokusetyenziswa kakuhle xa iingxoxo ezibambekayo ziphela). Xa ndixela imvakalelo yam yamava ndithetha ngeenyani. Ukuba isiphumo sinobunzulu, ngoko ke i-substantivity mhlawumbi ichanekile. Indlela yokujongana nale nto ayikokukhanyela iziphumo okanye ukugxeka into ethile, kodwa ukuxoxa ngendlela eqiqileyo yokuba izibakala aziyonyani. Ukuba ubufuna ukwenza njalo, andizange ndiwaqaphele amazwi akho kwingxabano enjalo. Obunye ububi boluntu olubuthathaka (abasetyhini kulo mxholo ngokuqinisekileyo ngabantu ababuthathaka, abangasoloko begxeka. Apha ndikulungele ukwamkela ibinzana elizothekileyo elithi "ubuthathaka"), kukuqhankqalaza inkcazo eyinyani endaweni yokujongana nayo. izibakala. Ndabhala ngayo ngokumalunga nokufundiswa kwabasetyhini kwindawo yokuqala, kwaye uninzi lwabasetyhini abayifundayo bakhubekile endaweni yokuzoba izigqibo ezifunekayo kunye nokuzama ukuphucula. Ingummiselo wokuvavanya ukukhumbula imeko (ukuba ucinga ukuba ilungile, isikhumbuzo asiyonto embi emehlweni akho ngokuqinisekileyo, kodwa ke andiyiboni into endityholwa ngayo).
T. ngo-Nissan 10 - 04/2022/10 ngo-05:XNUMX
Ukugxeka kwam akusiyo iGemara kodwa yindlela ye-scholarly-Lithuanian ehlekisa ngesicelo sokubhekisela kabini. Umzekelo ovela kubagwebi akufuneki uye kwi-Cheshin eyaziwa kakhulu imibongo ebaxiweyo, inemizekelo eyimpumelelo kakhulu kwaye enzulu, njengoko usazi ukuba ndixakeke kule mihla ngeemfundiso zomYuda othandekayo emva kokuphumelela kwiNkundla ePhakamileyo engentla kwaye apho izinto zifanele ukujongwa.
Ndikumangalele ngokunxulumene nesimbo endaweni yomxholo, oko kukuthi, indlela eyothusa ngayo - kwakhona, ukuhleka. Nabani na onyanzelisa ukuba ahlekise amalungu enkampani yakhe ngokuphindaphindiweyo, ngokuchanekileyo kuye kufuneka akrokre ukuba iingxoxo zakhe aziphumelelanga. Okanye, ukucacisa ulwimi lobungcwele bakho: "I-grin engentla iqhelekileyo kwaye ayibalulekanga (idla ngokusetyenziswa kakuhle xa iingxabano ezisisiseko ziphela)."
Ndiyaqonda ngokuqinisekileyo ukuba xa ndisebenza ndidibana nolu hlobo lwempendulo evela kubafundi abaninzi, kwaye oku kuthethelela iithiyori ezinje nezinje, ndiqhanqalazela nje isimbo sokujongelwa phantsi (ngokungafaniyo nabafundi bePhD kwizifundo zesini kunye noqoqosho lwasekhaya, abaye baphuhlisa kakhulu ubuntunu, ngakumbi xa Ukuyila umjelo wamanqaku ejenali). Kwinzululwazi yokuzisola "), oko kukuthi, sibuye kwakhona, kwaye ngeli xesha ndiza kucaphula ulwimi lwam olungcwele," kwingxoxo eqhubekayo ekhoyo apha, malunga nokudelela nokungaqhotyoshelwa. ukubaluleka komxholo, umoya kunye nemfundo ”.
T. ngo-Nissan 10 - 04/2022/14 ngo-17:XNUMX
Kodwa ireferensi ephindwe kabini ilahlekile kwiGemara ngokwayo. Oku akusiyo into eyenziwa ngabantu baseLithuania. Umphengululi waseLithuania unamathela kuphela kwinto ekhoyo, kwaye ibango lakhe kukuba ireferensi ephindwe kabini isemthethweni kodwa ayingombandela wokufunda lo mbandela, kwaye ngokuqinisekileyo ayibonisi nangayiphi na indlela ukuziphatha kakuhle okanye isiphene.
Andizange ndiliqonde ibango lakho malunga nesimbo. Akukho kusila apha. Ezi ziingxoxo eziqhelekileyo ngokupheleleyo zezidenge / izakhono zesebe lesini. Yiloo nto abayenzayo phantse lonke ixesha. Into endayithetha ngawo onke amabhinqa, kwanabo bangafundisisanga isini (uninzi lwabo bayandithanda), ndathi iingxabano ezinjalo ziqhelekile kumabhinqa, yaye ndicinga ukuba ezi ziinyaniso ezivela kumava am. Akukho mpikiswano apha kodwa ukujonga okuyinyaniso.
Ngomhla we-10 kaNissan 04 - 2022/15/47 ngo-XNUMX:XNUMX
Inene, njengoko ndabhalela uSarah, akukho siphako sokuziphatha apha, ndabona kuFacebook womnye wabaphengululi awacebisayo malunga nemizekelo efanayo naleyo iTractate Yevamot eyizisa ngokuphindaphindiweyo malunga noRuben kunye nokudlwengulwa kwakhe, ukuba kunokuba luncedo. ukuze kugcinwe uzuko lukaRubhen noShimon aze esikhundleni sakhe anike imizekelo ka-Aridata noDelphon nabanye oonyana abalishumi bakaHaman. (Kwelinye icala kukho imeko eyayisithiwa ngenxa yePurim kwaye wayengathethi konke konke) Ukutyhola abafundi besini ukuba abazimiselanga ngokwenene kodwa injongo yabo kukupapasha amanqaku, oku kukuhlambalaza kungekhona ukuqwalaselwa okuyinyani.
T. ngo-Nissan 10 - 04/2022/10 ngo-23:XNUMX
Ibukhali njengakuqala. wenze kakuhle.
Ezinye iingcamango ezingasonjululwanga:
A. Uburharha besilwanyana sakhe babuphoswa ngokwenene. (Ndizovuma ukuba ndiyiphosile ekuqaleni ukufunda)
B. Ndicinga ukuba oko kunceda umntwana kwi-Hyder into yokuba aqulunqe ekuqulunqweni kweGemara. Ukuba ibhentshi yakhe iyambuza ukuba yintoni kanye kanye le iphumayo uya kuqala ukubhanxwa nokuba neentloni.
Isithathu. Ukuba inkosikazi yam indixelela ukuba ibone impuku etyumkileyo esitratweni, ngaphandle kokonakala kwenkangeleko, ayizukundenza isicaphucaphu. Ukuba ndiyamxelela - uyagabha. Abanye abantu bazitsalela ngokwabo ubunyani abafunda ngabo baze babe namava ngandlela ithile kwaye abanye abayenzi. Umntu unokufunda uHarry Potter aze abone imuvi kwaye athi - khange ndiyicinge ngolo hlobo! Kwaye omnye umntu akazange andicingele. Ndiyakholelwa ukuba iimfundiso zaseBar Ilan ziyakuqonda ukujongwa kabini, kodwa abakwazi ukuzicingela ngokwabo iimeko.
D. Njengentsingiselo ethile, ndicinga ukuba ukuba umntu ufumana imeko ngokwenene afunda ngayo, kuya kuba nzima ngakumbi ukuba aqhawulwe. Uya kuzipeyintela ngokukhawuleza imeko njengoko ehlangabezana nayo. Esinye isizathu sokuba kube lula kumntwana oseHyderabad ukufunda ngokuza ngendlela engalunganga njalo njalo. Ayilohlabathi lakhe kangako.
uThixo. Kusenokwenzeka kwakhona ukuba umnqweno wokwenza izinto ezintsha, okhoyo kwabanye babafundi, kunye nokuphuma kwihlabathi labo ukuya kwihlabathi leTalmudic kwaye ungezi ngokupheleleyo njengabamkeli, kubangela ukuba ukufunda kube novakalelo.
kwaye. Ngaphandle kwamathandabuzo, uqhawulo lweemvakalelo luluncedo ekuqondeni imiba ngokucacileyo. Usenokuthi ulahlekelwe yinto ukuba awunxibelelanisi iimvakalelo kuyo kamva. Ukuziphatha ngokuqinisekileyo kufuneka ndidibanise ukuze ndiqonde umba, mhlawumbi neemvakalelo zinendawo apho.
(Ndandingaqondi ukuba yintoni ingxaki ngetyhubhu yegazi. Musa ukudlulisela igazi ngemibhobho kwizigulana? Ngaba akunakwenzeka ukudlulisela igazi elingenantsholongwane phakathi kweewadi ngombhobho? Okanye ukudlulisela igazi elisuka kwizilwanyana ezixheliweyo lisiwe kumbhobho wokuqhamisa? I-vampire kufuneka incediswe ukuhambisa igazi kwindawo apho axhelela khona abantu ekhitshini ngombhobho, ungayakha njani, njl. Kodwa lo ngumbuzo ongenatyala.
T. ngo-Nissan 10 - 04/2022/14 ngo-21:XNUMX
A. Mhlawumbi uyiphosile. Kodwa hayi nam. Wonke umgxeki endaweni yakhe umi ngaphandle kombuzo woburharha.
B. Ngokwenene, kufana nokubuza uR. Chaim ukuba yintoni ipani.
Isithathu. oku kulungile. Andinangxaki nabo babonisa iimeko ezingqondweni zabo, nakwabo bothuswayo yiyo. Andiqondi nje ukuba oku kothuka kubonisa ukuziphatha okuhle ngokomoya, okanye ukungabikho kwawo kubonisa isiphene.
D. Bona c. Oku kunokunxulumana nentetho yam ethandabuzayo ekupheleni koluhlu malunga nesiphene kwisifundo ngokwaso.
uThixo. Ngempilo. Ingaba likhona ibango apha? Andijongani nokuxilongwa kwabasetyhini okanye abafundi, kodwa ngondoqo. Hayi apho ivela khona kodwa ingaba ibalulekile kwaye ibalulekile.
kwaye. Ndamchazela apho akhoyo.
Andizange ndiqonde ukuba yintoni ingxaki ngombuzo malunga nevampire. Andiboni ngxaki kuyo.
T. ngo-Nissan 10 - 04/2022/14 ngo-10:XNUMX
Ngapha koko, iGemara ibhalwe kubugcisa bokunciphisa ngamandla. (Lo ngomnye wemimangaliso apho, kum, mfundi omangalisiweyo).
Ihlabathi lehlabathi linokusongwa kwisivakalisi samagama amathathu, umhlathi unokuqulatha amakhulu eminyaka yezithuba, kubaluleke kangakanani ukuthelekisa kwi-PSD yoPhezukonke? Oko kulele kwisivakalisi esinye esifutshane nesibukhali seGemara bekuya kuphalala apho kuninzi, ukuba bekungengomakhulu amaphepha.
Andibakrokri abachwephesha bamagama okugqibela ephepha leTalmudic ababenobuntununtunu kunaye nawuphi na owasetyhini kwaye kungekho mgwebi uphakamileyo.
Kwaye kufuneka sikhumbule ukuba yonke into yaqala kwixesha elidlulileyo, kwaye emva koko ukungabikho kweendlela zokubhala, imfuneko yokukopisha nokugcina izizukulwana.
Mhlawumbi unike umzekelo? Yintoni kwaye ungayibeka njani eSugia Danan?
Ngomhla we-10 kaNissan 04 - 2022/15/39 ngo-XNUMX:XNUMX
Ndivumelana nawe, kwaye akukho ngqiqweni ukuba ndiyibhale kwakhona iGemara. Ukuthelekisa imigwebo yale mihla kubhekisela kwimithetho yanamhlanje. Yaye mhlawumbi kwindlela urabhi abafundisa ngayo abafundi bakhe. Ndiyaqikelela ukuba lo ngurabhi amfundisayo, uya kufundisa lo mba kubafundi bakhe, kodwa kuya kubakho umqondiso omncinci womqondiso. Wink, utsho njalo njalo. Ibali lokufa kwi-avalanche alikho ukubaluleka kokuziphatha konke konke, nje intlekele enokuthi yenzeke nanamhlanje e-Ukraine, unentetho enomdla, malunga nomlomo. Ngaba ucebisa ukuba kukho izimbo zomzimba ezithile ezingagcinwanga kumbhalo omfutshane wokubhala ukuze zisetyenziswe kamva? Andazi kwaye andicingi ukuba ikho indlela yokwazi. Mhlawumbi kufanelekile ukucela umngeni kwingcali apha ukuba ngaba kwindawo ethile kwi-Shas kukho isimo sengqondo 'somvakalelo' kwinto ethile. Umzekelo, kwiphepha lanamhlanje kukho ibinzana elithandekayo elivela izihlandlo ezininzi - ngaba sisebenzisana nabangendawo? Le yingxelo eyinyani ngokupheleleyo, kodwa inomculo omnandi obhidekayo.
Ixesha leTorah kunye nexesha lomthandazo (kuSarah nezilwanyana zakhe)
Ngomhla we-10 kaNissan 04 - 2022/16/03 ngo-XNUMX:XNUMX
Kuye noSarah - molo,
I-Tannaim kunye ne-Amoraim eyayine-halakhah - nayo yayinentsomi kunye nababhali bemithandazo. Ngamazwi abo kwi-Halacha - qiniseka ukuba uqulunqa umbandela wegama. Ngelixa ilizwe labo leemvakalelo- libonakaliswe kumazwi abo kwintsomi kunye nemithandazo abayisekayo (eminye imithandazo emihle yobuqu ethi uTannaim no-Amoraim 'Batar Tzlotya' bahlanganiselwa ndawonye eTractate Brachot, kwaye uninzi lwayo lwaqukwa kwi'Siddur') . Ixesha leTorah ngokwahlukeneyo kunye nexesha lomthandazo ngokwahlukeneyo.
Ngokuzithoba, uHillel Feiner-Gloskinus
Kwaye kungafani notyekelo lwabaphengululi beTorah namhlanje ukudibanisa isifundo kunye nemvakalelo, ekuya kuthiwa ngayo: 'Lowo ufundisa intombi yakhe iTorah - ufundisa imithandazo 🙂
'Kwaye ubuyele entliziyweni yakho'-ukufaka ngaphakathi umxholo wesifundo entliziyweni yakho
Ishumi elinesibini likaNissan 12 - 04/2022/16 ngo-51:XNUMX
Nangona isifundo kufuneka sibe 'yingqondo elawulayo entliziyweni'. Ukufunda iTorah kufuna ukumamela iTorah engasoloko ingqamana nokuthambekela kwentliziyo - emva koko, emva kokucaciswa kwengqondo - kufuneka sidlulisele izinto entliziyweni ngomnqweno wokudala ukuchongwa komntu kunye nabafundi.
Jonga inqaku likaRebbetzin Or Makhlouf (Ramit in Midreshet Migdal-Anaz), kwifayile "Ngenxa yokuba zizilwanyana," uMigdal Iz Tisha: 31, p. 0 ukuya phambili. Apho ukhankanya, phakathi kwezinye izinto, intlungu kaGrid Soloveitchikf, ulutsha olugqwesileyo lobuOthodoki oluphumeleleyo kwinkalo yomzamo wobukrelekrele… lwafumana ulwazi lwezimvo kunye nezigwebo. Uyazonwabela izifundo ezintle kwaye uphonononga umbandela ontsonkothileyo. Kodwa intliziyo ayikathabathi nxaxheba kwesi senzo… UHalacha akabi yinyani kuye. Olona lwazi lukhoyo neShechina lulahlekile… '209 Amagama okuJonga, iphe. XNUMX). Jonga inqaku ngobude
Makwazeke ukuba iTorah ifuna ukusebenza kwentliziyo ngaphambi nangemva kwayo. Ngaphambi kwayo - ukulangazelela ukunxulumana noThixo ngobulumko bakhe nomnqweno wakhe kwiTorah nomthandazo wokuba siya kuba nelungelo lokwalathisa enyanisweni; Ulandelwa ngumthandazo wokuba sibe nelungelo lokusebenzisa imilinganiselo esiye sayifunda ebomini.
Ishumi elinesibini likaNissan 12 - 04/2022/16 ngo-56:XNUMX
Umhlathi 1, umgca 4
'Ikrele phakathi kwamathanga akhe nesihogo esivulekileyo phantsi kwakhe' kufuna isigqibo esicingisisiweyo nesizolileyo
T. ngo-Nissan 10 - 04/2022/14 ngo-57:XNUMX
Kwi-SD XNUMX kwi-Nissan P.B.
Umlamli ekuthatheni kwakhe izigqibo kufuneka asebenze ngaphandle kwesaqhwithi seemvakalelo zamazwe amabini. Yeha kuye kwelinye icala kwaye yeha kumphefumlo wakhe ukuba uthe walahleka waza washiya umfazi womntu, kwaye kwelinye icala yeha kuye kwaye yeha kuye ukuba i-ankile umfazi onokuvunyelwa. Isaci esilawulayo kumntu onyathela indlela emxinwa elucandweni senzonzobila, ukuba ukutenxa kancinane ukuya ekunene okanye ekhohlo – kusenokumhlahlisela enzonzobileni.
Yaye umlamli umele abe nexhala eliphindwe kabini, kuba ukungakhathali kuya kumkhokelela kummiselo ongeyonyani ngaphandle kokungakhathali, yaye umlamli owoyika uThixo umele abe nenyameko, enyamekela ukuba akayi kusilela aze avumele into eyalelweyo, yaye anyamekele ukuba akayi kwalela. okuvumelekileyo. Ukuxhalaba kwakhe kunye nenkxalabo yokuba ubulungisa buya kupapashwa - yinjongo yokufuna kwakhe inyaniso engadinwayo.
Kodwa isiphithiphithi seemvakalelo ezamthintela ekucaciseni i-halakhah - yona ngokwayo ifuna ukuba ingcaciso ngokwayo yenziwe ngendlela eqwalaselweyo kwaye ezolileyo, kuba ukucaciswa kwexhala kunye nokulahleka kwengqondo - bekungenakuyigubungela inyani. Ngoko ke, umlamli kufuneka azole ngexesha lophando, kwaye ulungele ukuqwalasela zonke iinketho, nokuba zibuhlungu kakhulu. Ngoko ke, xa umbuzo ufika - umlamli kufuneka abeke uqhwithela lweemvakalelo ecaleni kwaye acinge ngokuzolileyo.
Kule ndoda yehalakha ifana negorha elidutyulwayo, elimele lingasabeli kwangoko. Umele eme umzuzwana, azimele, abukele apho adutyulelwa khona, aze alungelelanise aze adubule ngokuchanekileyo kwindawo ekujoliswe kuyo. Impazamo ekubetheni utshaba iyingozi kumdubuli, njengoko ingcatsha utshaba indawo yakhe yokuzimela.
Kwaye kunjalo ke imeko yomsindisi ofika kwisiganeko esibuhlungu, esinobungozi obuninzi kunye neengozi ezininzi, omele afunde ngokukhawuleza imeko, kwaye abeke izinto eziphambili. Ngoko nangoko lungisa oko kuyingozi ngokukhawuleza, lungisa izinto ezingxamisekileyo, kwaye uyekele kwinqanaba lokugqibela oko kungangxamisekanga kangako. Uvavanyo lwemeko egadiweyo - sisiseko sonyango olululo.
Umnqweno onamandla wokuphumelela idabi okanye ukusindisa abantu abenzakeleyo - sisibaso esakhuthaza umlo okanye umphathi ukuba azinikele ngokuzithandela kwiyunithi yokulwa okanye umkhosi wokuhlangula, kodwa isigqibo sokuba yintoni kwaye yenziwe njani kwimeko 'yokungasebenzi' - kufuneka senziwe. ngogwebo olubaliweyo noluzolileyo.
Ngokuqinisekileyo phantse akunakwenzeka ukucinga ngokuzolileyo xa udibana nesiganeko esingalindelekanga, ukuba ngenxa yoxinzelelo umntu alibale yonke 'ithiyori'. Ukuza kuthi ga ngoku, abagwebi be-halakhic, abalwi kunye nabasebenzi bohlangulo babambe 'ikhosi yoqeqesho' ezama ukuqikelela yonke 'i-Batalam' enokwenzeka, ukuqulunqa kwangaphambili iipateni zesenzo kwimeko efanayo enokwenzeka, kwaye iingcali aziphenduli kuyo yonke imeko. Emva koko xa 'ukungasebenzi kakuhle' kufika - iskimu sesenzo siyavela kwangoko kwaye unokwenza ngocwangco ngaphandle kokuphinda uhlebe. Amacebo acingisiswa aza alungiswa kwangethuba.
Imicimbi yeTrakti Yavmot. Iintlekele zenyikima kunye nokuwa kwendlu, izifo kunye neendyikitya zokufa, ukunyamalala kwabantu kwiihambo zorhwebo kunye neenqanawa ezitshona elwandle, iimfazwe kunye nezintlu kunye nezicwangciso - yayiziimeko ezinokwenzeka ngokupheleleyo kwihlabathi apho izilumko zazihlala khona, ngakumbi ngemihla yokuvukela kwamaRoma, UkuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo kunye nemvukelo kaBar-Kochba.
Incwadi yesikhokelo yonyango olusebenzayo lweemeko ezicinezelayo kufuneka ichaphazeleke kwaye ibe mfutshane, kwaye ngokucacileyo kwaye ibandakanye zonke iiprototypes zeemeko ezinokwenzeka kwaye uzinike isikimu sonyango, ngoko imaski yeYavmot yenziwe ngendlela emfutshane kunye neyomileyo, kanye njenge Incwadi yethiyori yokulwa okanye uncedo lokuqala luya kwenziwa .
Ngokuzithoba, uHillel Feiner Gloskinus
KwiMishnah nakwiTalmud, amagama athi 'telegraphic' azimisele ukuwadlulisela ngomlomo. Ukuze bakwazi ukunkqaya, kufuneka benziwe ngendlela ekhaphukhaphu netsalayo. Incoko enzulu ixesha elide okanye ukugqabhuka kwengqondo akuncedi ngokucengceleza. ITalmud yeyokufunda nzulu, yaye umthandazo ngowokuthululwa komphefumlo. 'Inxalenye' kufuneka ibemfutshane kwaye ibemfutshane
'UWillen wabiza uYakobi ngobo busuku' - isaqhwithi seemvakalelo ezifuna isenzo sokuzola
T. ngo-Nissan 10 - 04/2022/15 ngo-15:XNUMX
Ke ngoko uYakov Avinu, othandaza enexhala nenkxalabo, ‘Nceda undisindise, mntakwethu, ngoko nangoko, yenze… hleze afike alungiselele unina oonyana’-uyaqhubeka esenza ngokuzolileyo. Akaqalisi kwangoko ukubaleka. Hayi, yena nomkhosi wakhe balala (ngubani na ongálala kobu bugxwayiba?) Nivuke nisefreshi, bawuhlangabeze umkhosi kaEsawu.
Kwaye kwanoDavide wabaleka kuAbhisalom unyana wakhe, xa watyhoboza wadanduluka wathandazela ukuba usindiso lwakhe abaninzi ababemvukile nxamnye naye, bonke abantu nxamnye neqaqobana abathembekileyo wahlala kunye naye. Uvakalisa lonke ixhala analo ngomthandazo, yaye umthandazo wakhe umnika amandla okwenza izigqibo ezifanelekileyo. Uzama indlela yokuthethelela ngokuthumela ingqiqo yakudala ukuba aphule icebiso lika-Ahitofele, yaye emva komthandazo nokucenga, uqinisekile ngaloo nto, yaye ekwazi kwimeko yakhe emanyumnyezi ukuba aqhubeke exolile ‘ndiya kulala phantsi, ndilale ubuthongo ngenxa yokuba ufile. NguYehova yedwa, ohleliyo ngokuqinisekileyo.
Ixhala libonakaliswa ngomthandazo, yaye umntu ukhuliswa kuwo ngentembelo ukuba enze ngobulumko.
Ngomhla we-10 kaNissan 04 - 2022/16/59 ngo-XNUMX:XNUMX
Vumelana nayo yonke into oyithethayo.
Kwaye nangaphakathi kwe-halakhah amaxesha amaninzi imvakalelo eninzi igcinwa. Kwaye ngokuqinisekileyo indibaniselwano yentsomi kunye ne-halakhah ivumela oku kwinqanaba elithile,
Njengomzekelo (ubomi bakhe) obuchukumisa intliziyo, kwincasa yam: (Ndicinga ukuba kukho ijaji kwiNkundla ePhakamileyo eye yazivumela ukuba ichithe kakhulu)
Ngomhla we-10 kaNissan 04 - 2022/17/14 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngomhla we-10 kaNissan 04 - 2022/17/45 ngo-XNUMX:XNUMX
Caphula ewe, kodwa ungaqinisekanga ukuba ngebeliqalisile ibango elinjalo.
Ngendlela, unokubona ukuba ixesha elide kangakanani izigqibo zikhula kwaye zibe yindinisa, kwiminyaka, xa isandla sikhanya kwikhibhodi, kwaye yonke imithombo iyafumaneka, kwaye akusekho mfuneko yokuyalela intatheli.
'Ufundisa ukuba akazange alale' - nangona umdla
Ishumi elinesibini likaNissan 13 - 04/2022/00 ngo-04:XNUMX
I-BSD XNUMX kwi-Nissan PB
Ngokubaluleka kokugcina ukuzola ngelixa usenza, uHasidim wacacisa inqaku lesilumko elithi 'Ewe, uAron wenza - ufundisa ukuba akazange alale', ukuba akuqondwa ukuba yintoni 'iSalka Da'ata' ukuba uAron ongcwele ulala evela kuThixo. imiyalelo? Kwaye abalandeli bachaza ukuba nangona uAron wayezele yintshiseko xa wayesiya kukhanyisa isibane kwaye kwakukho indawo yokuziva ukuba ngenxa yehlombe uya kuphosakela kwiinkcukacha. U-KML owathi, nangona exhonyiwe, ulumkile ukwenza imisebenzi yakhe ngokuchanekileyo.
Ngomhla we-10 kaNissan 04 - 2022/17/22 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngokuphathelele ibango lezixhobo (endingayamkeli nam), kumsonto owuvulileyo kwi-IDF, mhlawumbi abantu baseSura bangumzekeliso ogqithisileyo weli bango kwimeko engacingelwayo. https://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=24&topic_id=2827720&forum_id=1364
Ngomhla we-10 kaNissan 04 - 2022/19/06 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngokwenene, apho kunye noRami Bar ukuphindaphinda kwezinto kuyintlekele kunye nomdlalo ohlekisayo kwindawo enye. Kodwa apho kunokuthiwa, ekubeni izinto zazisele zenziwe, bacela kuye imisebenzi yakhe. Kwaye kuyabonakala ukuba wayengafuni ukuthembela etafileni yabanye
Ngomhla we-10 kaNissan 04 - 2022/22/20 ngo-XNUMX:XNUMX
Kukho indawo "yeemvakalelo ezilawulayo" ngokutsho kweGemara xa amaqela amabini eza ukuphikisana phambi kweDayanim kwaye akukho sigqibo esicacileyo, into ebizwa ngokuba yi "Shuda Dadayin".
Ngomhla we-11 kaNissan 04 - 2022/00/07 ngo-XNUMX:XNUMX
U-Shuda Dadaini ugweba kwiimeko ezichanekileyo kwaye kungekhona kuzo zonke iimeko apho kungekho sigqibo. Kuba oku kukho imithetho eyaneleyo. Kodwa noShuda akayomvakalelo kodwa yintuition. Musani ukulwa omnye nomnye.
Ngomhla we-10 kaNissan 04 - 2022/23/16 ngo-XNUMX:XNUMX
Ngokombono wam, yinyaniso: Umntu waqala ingxoxo ye-intanethi kumbuzo othi "Ukuba ufumene ngomso ukuba ubuKristu buyinyaniso - ngaba uya kutshintsha indlela yakho yokuphila ngokufanelekileyo". Ezinye zeempendulo zeidiotic zazithi "ayizukwenzeka ke akukho sizathu sokubuza". Abantu ngokwenene banobunzima bokuqonda icandelo lombuzo ocingelwayo. Ndazama ukubachazela ukuba nabo mhlawumbi abanakuze baphose umntu otyebe kakhulu kumzila kaloliwe ukunqanda ukuba uloliwe abaleke abantu abanyanzelweyo abahlanu, ukanti lo ngumbuzo osisiseko kwiikhosi zefilosofi yokuziphatha kakuhle; Kodwa ayizange isebenze...
Emva koko omnye umntu wandiphikisa ukuba ngokwemigaqo imibuzo eqikelelwayo ilungile, kodwa kukho izinto ezothusayo ngokweemvakalelo kwaye ke akulunganga ukuxoxa ngazo ngentelekelelo (ngokuchaseneyo, yithi, ukunyathelwa komntu otyebe kakhulu ngololiwe ohamba ngeenyawo. mhlawumbi ayothusi konke konke). Umbhali wayengu-R.M. kwisikolo samabanga aphakamileyo i-yeshiva, kwaye ayicacanga kum into ayenzayo kwimiba efana nale uyikhankanyi apha… Ngapha koko, emva kwengxoxo emfutshane wandibuza ukuba ndicinga ukuba kufanelekile ukuba andibuze " ungathini xa ufumanisa ngomso umamakho uyabulala" . Ewe khange ndiyiqonde ukuba yintoni ingxaki yalonto, ndade ndayoxelela umama, naye ebengaqondi ukuba yintoni ingxaki yalombuzo... uqonde ukuba yeyiphi ingongoma awayezama ukuyicacisa.
Umgca ophantsi - xa kunzima ukuba abantu bajongane nomxholo (ngengqondo!) Babalekela kwimida kwaye bazama ukubonisa 'iingxaki' ze-cosmetic njengesizathu sokuba kutheni okokuqala akufanelekanga 'ukubandakanya kulo mxholo (ngoko. kushiyeke ukuba kufundwe kuphela Ibali elimnandi kakhulu).
Ngomhla we-11 kaNissan 04 - 2022/00/11 ngo-XNUMX:XNUMX
kanjalo. Ndiphawula nje ukuba kukho indawo yebango lakhe malunga nobuKristu ngale ndlela ilandelayo: mhlawumbi ngokoluvo lwakhe ukuba ubuKristu bunengqiqo ngoko yayingebubo ubuKristu esibaziyo. Ngoko akukho ndawo yombuzo wokuba ngendenze ntoni ukuba ndandifumene ukuba ubuKristu bulungile. Ngokukwanjalo, akukho sizathu sakubuzwa ngoko uMaimonides ngewayethethe ngayo nayiphi na imeko kumhla wethu. Ukuba ebesaphila namhlanje ebengayi kuba nguMaimonides.
Ngomhla we-10 kaNissan 04 - 2022/23/29 ngo-XNUMX:XNUMX
Molo Rabhi Michi.
Kunzima ukuphikisana nebango lakho, ngokwenene "kwingqiqo eqhelekileyo" kucacile ukuba eyona nto ihlambulukileyo kwaye ilungile kukusebenza kunye nohlalutyo olunengqiqo lwe-halakhic. Kodwa akunakwenzeka ukungayinanzi into yokuba amaxesha amaninzi imiba ye-Shas yabafundi isongwe ngamabali abanika ufundo lomkhombandlela wobuntu okanye wokuziphatha.
Ndiza kunika imizekelo emi-2 (owokuqala ubuthathaka kancinci): Emva kokuba u-Tractate Gittin exoxe ngeenkcukacha zeengxaki ezahlukeneyo eziqikelelwayo nezenyani, uyasokola ukugqiba ngentshumayelo yentiyo noqhawulo-mtshato. Yaye indlela okumenza buhlungu ngayo uThixo ngoqhawulo-mtshato ngokwalo. Kutheni le nto kubalulekile ukuba iGemara iyiphelise iTraktha ngale ndlela? Ngaba apha ayisiyondlela yokufunda?
KwiGemara eKiddushin kukho intsomi entle malunga noRabi uAsi kunye nomama wakhe. Ibaluleke kangangokuba yawufaka ngokupheleleyo umthetho kaMiriam, iSahluko XNUMX, noMaimonides. Ekupheleni komcimbi kubhaliwe ukuba uRabi u-Asi wathi "andiyazi iNafaki" Uninzi lwabahlalutyi bachaza esi sivakalisi ngeeglasi ze-halakhic. URabi u-Asi uthi akayi kushiya iLizwe lakwaSirayeli ngenxa yezizathu ezahlukeneyo ze-halakhic (ukungcola kweentlanga ngenxa yokuba ungumbingeleli kunye nezinye izizathu). UMaimonides wabhala kwiHalacha ukuba eneneni ukuba abazali bakhe babeqhathiwe wayenokuthuthuzela aze ayalele omnye umntu ukuba abanyamekele. IMoney Mishnah iyamomeleza uMaimonides ibe ithi nangona ingabhalwanga ngokucacileyo ngalo mbandela kusenokwenzeka ukuba uRabhi uAsi wayedla ngokuwenza. URabhi unomsindo kuMaimonides yaye uthi le asiyondlela nendlela umntu anokubashiya ngayo abazali bakhe komnye umntu ukuba abanyamekele. (Kunokuphikiswa ukuba oku kuqwalaselwa kwe-halakhic kodwa kuthetha nje ukuba akanako ukunyamezela ingcamango yokuziphatha) Akukho miba = andiyi kushiya iBhabhiloni. Yaye ibhekisela kuhlaselo lukaRab’ad kuMaimonides.
Inyaniso kukuba, enyanisweni, ubulungisa be-halakhic kunye ne-Maimonides kunye nemicimbi yemali kodwa amehlo ethu ayabona ukuba isifundiswa kunye nejaji baye bafunda le ntsomi ngokwenene ekufundeni kokuziphatha kothando.
Ndiqikelela ukuba ukuba bendinayo phambi kwam incwadi yomfundi wezilumko, uRabbi Yehuda Brandes, "Intsomi Enyanisweni," bendiya kunika imizekelo embalwa kwaye mhlawumbi iphumelele ngakumbi.
I-PS: Ukulinda kunye nokulinda ikholamu kwimpikiswano yokuguqulwa (ungakanani ongamelana nayo?)
Ngomhla we-11 kaNissan 04 - 2022/00/13 ngo-XNUMX:XNUMX
Kukho imizekelo embalwa ngokwenene. Jonga umzekelo kuluhlu lwama-214 eluthuthwini lwakhe ngenxa yeentolo zakhe. Kodwa ayisiyiyo le nto ndithetha ngayo apha. Babefuna ukundifundisa ukuba uqhawulo-mtshato yinto embi. Oku kunanto yakwenza njani nokulawula ihalakhah kule miba? Inento yokwenza nobunkokeli jikelele obuqhankqalaza ngokuchasene ne-halakhah ukuba kufuneka kwenziwe iinzame zokunqanda uqhawulo-mtshato.
Ngomhla we-11 kaNissan 04 - 2022/09/36 ngo-XNUMX:XNUMX
“Umlamli kufuneka acinge nzulu ngetyala eliza phambi kwakhe. Into ethethwa yi-halakhah ayinanto yakwenza nento ethethwa yimvakalelo (kwaye ngokombono wam hayi noko kutshiwo ngokuziphatha), kwaye kuhle ukuba yenze. Umlamli kufuneka awunqumle umthetho ngokuzola, aze ngaloo ndlela abe nelungelo lokwalathisa inyaniso yeTorah. "Kuze kube ngoku amazwi akho.
Ndenze umzekelo kwibali likaRabhi uAsi kunye nomama wakhe owagwetyelwa uHalacha. Ekugqibeleni ndathi uRabhi noRashash babengavumelani nabo ngokungekho mthethweni, ngemvelaphi yomntu okanye yokuziphatha.
Ngomhla we-11 kaNissan 04 - 2022/10/03 ngo-XNUMX:XNUMX
Isicatshulwa esibi kakhulu sigcwele ukucaphula konke. Emva koko, ndabhala ukuba kukho indawo yokwazisa ingqwalasela enjalo kwisigaba B, emva kokuba sigqibile ukuxoxa ngeendlela ezisisiseko ze-halakhic. Ukuba umthetho awunqunyulwanga kodwa kukho iindlela ezininzi zokukhetha, indlela yokugqiba phakathi kwazo inokuqulatha ukuziphatha kakuhle (kwaye mhlawumbi neemvakalelo njengesalathiso).
I-11 ngo-Nissan 04 - 2022/19/59 ngo-XNUMX:XNUMX
1. Mhlawumbi esi sesinye sezizathu zokuba iGemara ingabi yeyabasetyhini kwaye bangafaneleki ukuyixoxa? (Abuzi kugqiba)
2. Inyani yeyokuba iminyaka xa ndifunda "iiBhayibhile ezimbini kunye neNguqulelo enye" ​​ndiye ndadibana namabali akwiTorah athi kum nangenxa yesizukulwana sethu sabasetyhini asinamvakalelo (ngokucacileyo kunjalo) andizange ndabelana ngendawo endiyingqongileyo kuba. Andinawo amazwi okuchaza indlela endivakalelwa ngayo ingakumbi sixakeke yimvakalelo, ngoku andikhumbuli imizekelo emininzi ngaphandle komnye xa uEliyezere wafika kwiingxoxo zokuthatha uRebheka (ngelo xesha iglowubhu lalingekabi nalusapho olunye. inokuba ibikukwahlulwa kwehlabathi kwintsapho yakhe ukuba yongeza apha kwimvakalelo) kunye noyise uBhetuweli kunye nomntakwabo uBen bazama ukulibazisa kwaye ke Intombazana (ungalibali ukuba yayineminyaka emithathu ubudala yenye inqaku elinegalelo kwimvakalelo umdlalo wonke) Izilumko ziyabuza kwaye uphi uyise etempileni? ziphendula izilumko ukuba wafa (wadla ipleyiti enetyhefu awayeyilungiselele uEliyezere ngengelosi eyatshintsha amacwecwe ngokungathi ndandizikhumbuzi ze-hyder) kwaye kuchazwe kwangoko ukuba babuza bamthumela uRebheka endleleni yakhe, kwaye nanku unyana. uyabuza ucinge imeko namhlanje intlekele enjalo uDom uEliezer ebeya kuthi okwangoku abe ziiplani zakhe kwaye angaziva ehlazekile yiklasi yakhe yonke kwaye esekhaya ngoku xa ejongene nentlekele yosapho (mhlawumbi ezama ukusonga izixhobo ngokuzolileyo kwaye shiya indawo njengoko wafika ngexesha elinzima okanye ngenye indlela ngenxa yokungahambi kakuhle Injongo yokuza kunye nokunceda umzimba wakhe wonke kunye nomphefumlo wakhe uququzelele umngcwabo nokwakha intente kunye nokuzisa izitulo zabalilayo njl njl.) kodwa ekusebenzeni kwi Ihlabathi leTorah njengesiqhelo liyaqhubeka ngaphandle kokuba izicwangciso ziqhubeka njengoko zicwangcisiwe Kwi-autism, u-rabbi apha unonyango oluvela kwi "Dauriyta" ukuba ube nenkampani elungileyo.Kwimeko kaYosefu nomntakwabo, ewe, madoda, nantsi imeko (olumothuko lukaEsawu aluhambanga ngokwezazi. Lwahlawulwa nguMordekayi umYuda kwiminyaka engamawaka kamva, njengoko kusaziwa njalo). Ngaphaya kweqhosha lehempe yakhe, kanye xa iijaji zazama ukukhuthaza omnye ukuba aqhawule umtshato nomfazi wakhe ngokumxelela ukuba kubhaliwe kwathiwa isibingelelo sehla iinyembezi wabaphendula hayi kakubi unanamhla ndiphalaza iinyembezi bekungayi kuba buhlungu ukukhupha iinyembezi ezimbalwa. Ngoku kwakhona, Kabawo owabona kwangaphambili etempileni egwaza unyana wakhe kwaye apho uyise wangena kwingqondo yegrama waya waza wayalela ukuba akhuphe unyana wakhe ngelixa ebhabha efuna uncedo ngenxa yokoyika ukungahlambuluki (endaweni yokuphosa isingqi) kunye neGemara. uxoxa apho lo bawo, nokuba unentlonipho egqithileyo okanye "i-autism" ngokunxulumene nokubulala
3. Kwimeko yentetho karabhi “kufana nokubuza uR. Chaim ukuba yintoni ipani” umzekelo karabhi awuphumeleli kwaye ndiza kuyicacisa ngebali le nto mhlawumbi ngeminikelo nezishumi uR. Chaim wambuza ukuba yintoni iavokhado. ? R. Avraham wachukumiseka waza wathi uyayiqonda na intsingiselo yelininzi? Ukuba kuyo yonke iBhabhiloni neYerusalem kunye neMidrashim neTosefot neZohare, njl., igama leavokhado alikho.
UMasach Pan sele ekhankanyiwe kwiTorah izihlandlo ezininzi apha ukuze abulele urabhi "ngenqaku urabhi angazange alibhale" emva kokufa kukarabhi wethu ekugcineni isigwebo kanye njengoko eyalelwe ukuba athethe into eviweyo Yayibaluleke kakhulu) kunye nechibi uRabhi athanda ukuxhela iinkomo ezingcwele naphi na ngoku kwiminyaka yakhe engamashumi amathathu xa lifudumala lithanda kakhulu ukugqabhuka kwedome leTempile Mount ngaphezu kokuxhelwa kwenkomo engcwele, ndakhe ndabuza uRabhi wethu kwindawo enolwazi ukunyelisa nokuba ndivunyelwe ukuba ndithethe Indumiso yokwenene (kwaye ndongeza oko kum yindumiso enkulu) kodwa umphulaphuli ucinga ukuba eli bali lihlazo kwaye ndizise njengomzekelo amabali angoR. Chaim (ngendlela uR. Chaim ebeya kwenza ngayo thandaza malunga nayo kathathu ngosuku ukuba ungakhumbuli nantoni na ngaphandle kwale Torah obunye ubungqina obuchasene noRabbi Shefilot Assistants) kwaye kubonakala kum ukuba uRabi wandiphendula ukuba mhlawumbi akuvumelekanga kwaye kwinkqubo wandixelela ukuba njengomfundi we-yeshiva eMelika apho. yayilulonyulo lukamongameli ndicinga ukuba ngumongameli ogama linguJohnson kwaye babenomphathiswa we-yeshiva ngelo gama kunye nentloko yabo ye-yeshiva igxininiswe ekufundeni xa bamxelela ukuba uRosh Yeshiva wayezibuza ukuba umphathiswa we-yeshiva waba nguMongameli wase-United States ngobusuku nje obunye.
I-11 ngo-Nissan 04 - 2022/20/15 ngo-XNUMX:XNUMX
R. I-Chaim ye-pan ngu-R. Chaim of Brisk
I-12 ngo-Nissan 04 - 2022/01/06 ngo-XNUMX:XNUMX
Ivela phi loo nto? Kwimeko nayiphi na into, into ephambili kukuba sobabini siyavuma ukuba akuyena R. Chaim Welder
I-12 ngo-Nissan 04 - 2022/02/15 ngo-XNUMX:XNUMX
Kuthiwa uRabbi Chaim waseBrisk wakhupha iipani kunye neembiza kwi-poll yezimvo, oku kuthetha ukuba umntu akafuni ukwazi kakuhle ukuba i-pan yakhiwe njani kwaye yintoni umlinganiselo phakathi kobude bomqheba kunye nobubanzi bomphezulu. . Ngaloo ndlela kwenzeka ukuba kungekhona ngendlela eqhelekileyo akukho mfuneko yokuba umntwana aqonde ukuba yintoni kanye kanye kodwa kuphela ukuba benza into engeyiyo ngendlela ayenzayo kwaye kukho zonke iintlobo zemithetho, kwaye ukuqonda kwakhe kwe-halakhic akonakali kuyo. nantoni na.
Ngokubanzi, nje uR. Chaim nguR. Chaim of Brisk (ubuncinci kwiindawo ezijongene nazo kwiGemara kuneHalacha), njengokuba iRashba iR. Shlomo ben Aderet kwaye kungekhona uRash Mashantz, nangona imbeko zombini zinkulu kakhulu.
Ishumi elinesibini likaNissan 12 - 04/2022/17 ngo-50:XNUMX
Rabhi undenzele ijow ngebali endilive kanye kulo mongo:
Ndikhumbula ukuba kwisifundo endandisiya kuso, urabhi owayefundisa eso sifundo wasixelela (bonke abo babenenxaxheba yayingamadoda) ukuba wayefundisa isifundo seGemara sokwakha isikolo sobufundisi, yaye sasikwiTractate Yavmot.
Usixelele ukuba uzobe ebhodini yonke "family" yalomcimbi wafaka iiX kubo bonke "abangasekhoyo" emva koko wajonga ngasemva wabona ukuba ubuso bamantombi bungcangcazela.
Babasizela "abafi" ababepeyintwe ebhodini.
Ngokungathandabuzekiyo, sonke sahleka kwaye salincumela eli bali.